Guddiga Difaaca Golaha Shacabka oo ka doonaya Aqalka Sare inuusan wax ka beddelin Xeerka Ciidanka – Kalfadhi
Xoghayaha Guddiga Difaaca Golaha Shacabka Xildhibaan Sadiiq Warfaa, oo wareysi kooban siiyay Kalfadhi, ayaa Aqalka Sare ka codsaday fududeynta Hindisaha Sharciga Xaqsiinta Ciidanka Qalabka Sida. “Waxaan ka codsanayaa Aqalka Sare in aysan nagu soo celin (Hindisaha) Sharciga Xaqsiinta Ciidamadda Qalabka Sida, oo ay ku daraan arragtidooda, kadibna ay meel mariyaan” ayuu Xildhibaan Sadiiq Warfaa, ku yiri Kalfadhi.
Xildhibaan Warfaa waxaa uu Kalfadhi la wadaagay iney walaac ku hayso inuu Hindisaha Sharcigan dib u dhaco, oo uu u gudbo Kalfadhiga 5-aad ee Baarlamaanka. Taas waxay dhici kartaa haddii uu Aqalka Sare geliyo Aqrinta 1-aad, 2-aad iyo 3-aad, markaas kadibna uu ansixiyo, Golaha Shacabka oo ay tahay inuu dib ugu soo noqdo hindisahana waqtigaas waxa lagu wadaa inuu galo fasax. “Haddii (Hindisaha) Sharciga ay waxyaabo badan ka badalaan, Golaha Shacabka ayuu ku soo laabanayaa, waana dib u dhac kale” ayuu yiri Xildhibaan Sadiiq Warfaa.
Intaas waxa uu raaciyey in ay ciidanku u baahan yihiin in la dadejiyo Hindisaha Xeerkan oo, sida uu sheegay, ay la’aantiis ciidanku ku la’ yihiin xaq fara badan. “(Hindisaha) Sharciga Xaqsiinta Ciidamadda Qalabka Sida waxa uu abuurayaa Santuuqa Hawl-gabnimadda oo ay xubnaha Ciidanka wax ku ridaan, dowladduna ay kabto” ayuu yiri Xildhibaan Warfaa. “Waxaan rabnaa in (Hindisaha) Sharciga Xaqsiinta Ciidamadda Qalabka Sida ka soo dhamaado Aqalka Sare, si uu u saxiixo Madaxweynaha Soomaaliya” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in ay hubiyeen in ay dowladdu awooddo fulinta waxa ku qoran Hindisaha Xeerkan. “Waxaan ogaanay in (Hindisaha) Sharciga Xaqsiinta Ciidanka ay awoodi karto Dowladda Soomaaliya xiligaan” ayuu Warfaa ku yiri Kalfadhi. “(Hindisaha) Sharciga Xaqsiinta Ciidanka Qalabka Sida waa mid la jaanqaadaya sharciyada dunida ka jira, sida kuwa wadamadda dariska nala ah” ayuu Xildhibaan Sadiiq Warfaa sii raaciyey hadalkiisa.
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa, 30-kii Diseembar ee sanad kii dhamaaday, meel mariyay Hindisaha Sharciga Xaqsiinta Ciidanka Qalabka Sida. Codeyn Golaha ka dhacday kadib ayey 171 Xildhibaan ogolaatay, waxaana diiday 2 Xildhibaan oo kaliya, Xubin ka aamusayna ma jirin, taas oo farax gelisay Guddiga Difaaca Golaha Shacabka iyo Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya.
Musharrixiin soo dhaweeysay go’aan ay Puntland uga qaadday xayiraaddii deegannadeeda